Vaovao - mandeha ho azy: ny ho avin'ny siansa data sy ny fianarana milina?
Automation: ny ho avin'ny siansa data sy ny fianarana milina?
Ny fianarana milina dia iray amin'ireo fandrosoana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny informatika ary ankehitriny dia hita fa afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatry ny angon-drakitra sy analytics lehibe. Fanadihadiana angon-drakitra lehibe dia fanamby goavana amin'ny fomba fijerin'ny orinasa. Ohatra, ny hetsika toy ny fahatakarana ireo endrika data isan-karazany marobe, ny famakafakana ny fanomanana angon-drakitra ary ny fanivanana ireo angon-drakitra misimisy kokoa dia mety ho mavesatra be. Ny fandraisana mpiasa manampahaizana momba ny siansa momba ny angona dia volavolan-kevitra lafo vidy fa tsy fomba iray hahatongavana amin'ny orinasa rehetra. Mino ny manam-pahaizana fa ny fianarana milina dia afaka manamboatra ny ankamaroan'ny asa mifandraika amin'ny fanadihadiana - na ny mahazatra na ny amin'ny sarotra. Ny fianarana milina mandeha ho azy dia afaka manafaka loharano manan-danja izay azo ampiasaina amin'ny asa sarotra sy manavao kokoa. Ny fianarana milina dia toa mihetsika amin'ity lalana ity foana.
Automation amin'ny sehatry ny haitao fampahalalana
Ao amin'ny IT, ny automation dia ny fifandraisana amin'ireo rafitra sy rindrambaiko samihafa, ahafahan'izy ireo manao asa manokana nefa tsy misy idiran'ny olombelona. Ao amin'ny IT, ny rafitra mandeha ho azy dia afaka manao asa tsotra sy sarotra. Ohatra iray amin'ny asa tsotra dia mety ny fampifangaroana endrika miaraka amin'ireo PDF sy fandefasana antontan-taratasy ho an'ny tena mpandray, raha toa ka ohatra iray amin'ny asa sarotra ny fanomezana backup any ivelan'ny tranokala.
Raha te hanao tsara ny asanao ianao dia mila mandahatra programa na manome torolàlana mazava momba ny rafitra mandeha ho azy. Isaky ny misy rafitra mandeha ho azy hanovana ny haben'ny asany, dia mila havaozin'ny olona iray ilay programa na torolàlana. Na dia mahomby amin'ny asany aza ny rafitra mandeha ho azy, dia mety hitranga ny lesoka noho ny antony maro samihafa. Rehefa misy lesoka dia mila fantarina sy ahitsy ny fotony. Mazava fa ny manao ny asany dia miankina tanteraka amin'ny olombelona ny rafitra mandeha ho azy. Arakaraka ny maha-sarotra ny toetran'ny asa no avo kokoa ny mety hisian'ny lesoka sy ny olana.
Ohatra iray mahazatra amin'ny automatisation amin'ny indostria IT dia ny automatisie fanandramana ireo interface amin'ny mpampiasa tranonkala. Ny tranga fitsapana dia ampidirina ao amin'ny script automation ary ny interface ny mpampiasa dia voasedra mifanaraka amin'izany. (Raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ny fampiharana azo ampiasaina amin'ny fianarana milina, jereo ny Machine Learning and Hadoop in Next Generation Fraud Detection.)
Ny adihevitra manohana ny mandeha ho azy dia ny manao asa mahazatra sy miverimberina ary manafaka ny mpiasa hanao asa sarotra sy mamorona kokoa. Na izany aza, voalaza ihany koa fa ny automatisation dia nanilika andraikitra na andraikitra lehibe nataon'ny olombelona teo aloha. Ankehitriny, miaraka amin'ny fianarana milina miditra amin'ny indostria isan-karazany, ny automatisation dia afaka manampy refy vaovao.
Ny hoavin'ny fianarana milina mandeha ho azy?
Ny votoatin'ny fianarana milina dia ny fahafahan'ny rafitra mianatra tsy tapaka avy amin'ny angona ary mivoatra tsy misy fitsabahan'ny olombelona. Ny fianarana milina dia afaka manao toy ny ati-dohan'olombelona. Ohatra, ny motera fanolorana amin'ny tranokala e-varotra dia afaka manombana ny tian'ny mpampiasa manokana sy ny tsirony ary manome tolo-kevitra momba ny vokatra sy serivisy mety indrindra hisafidianana. Raha jerena io fahaiza-manao io, ny fianarana milina dia hita fa mety indrindra amin'ny fanaovana automatique asa sarotra mifandraika amin'ny data sy analytics lehibe. Nandresy ny fetra lehibe indrindra amin'ny rafitra mandeha ho azy nentim-paharazana izay tsy mamela ny fidiran'ny olombelona matetika. Betsaka ny fandalinana tranga izay mampiseho ny fahafahan'ny milina mianatra manao asa fandinihana angon-drakitra sarotra, izay horesahina ato amin'ity taratasy ity.
Araka ny efa nomarihina, ny angon-drakitra angon-drakitra lehibe dia tolo-kevitra sarotra ho an'ny orinasa, izay azo zahana ampahany amin'ny rafi-pianarana milina. Amin'ny fomba fijery raharaham-barotra, ity dia afaka mitondra tombony maro toy ny fanafoanana ireo loharanom-pahalalana momba ny siansa ho an'ny asa famoronana bebe kokoa sy asa fitoriana, asa lehibe kokoa, fotoana kely kokoa hamitaana ny asa sy ny fahombiazan'ny vidiny.
Tamin'ny 2015, ny mpikaroka MIT dia nanomboka niasa tamin'ny fitaovana siantifika data izay afaka mamorona modely data azo vinavina avy amin'ny angon-drakitra marobe amin'ny alàlan'ny teknika antsoina hoe algorithma synthesie faran'izay lalina. Nilaza ny mpahay siansa fa ny algorithm dia afaka mampifangaro ny endrika tsara indrindra amin'ny fianarana ny milina. Raha ny filazan'ny mpahay siansa dia nanandrana izany tamina datasety telo samy hafa izy ireo ary manitatra ny fitiliana mba hahitana bebe kokoa. Tao anaty taratasy iray izay haseho ao amin'ny International Conference on Data Science and Analytics, mpikaroka James Max Kanter sy Kalyan Veeramachaneni dia nilaza hoe: "Amin'ny fampiasana ny dingana fandefasana mandeha ho azy, manatsara ny làlana iray manontolo isika nefa tsy misy idiran'ny olombelona, ​​mamela azy io hametraka amin'ny doka samihafa."
Andeha hojerentsika ny fahasarotan'ny lahasa: ny algorithm dia manana ny fahafantarana azy ho fahaiza-manitsy azy, miaraka amin'ny fanampian'ny fahitana na soatoavina azo alaina na alaina avy amin'ny angon-drakitra (toy ny taona na miralenta), ary aorian'izany ny angon-drakitra mialoha modely azo foronina. Ny algorithm dia mampiasa fampiasa matematika sarotra sy teôria mety hilazana antsoina hoe Gaussian Copula. Mora noho izany ny mahatakatra ny haavon'ny fahasarotana azon'ny algorithm. Ity teknika ity koa dia nahazo loka tamin'ny fifaninanana.
Ny fianarana milina dia mety hisolo ny enti-mody
Resahina eran'izao tontolo izao fa ny fianarana ny milina dia mety hisolo asa maro satria manatanteraka asa amin'ny fahombiazan'ny ati-dohan'olombelona. Raha ny marina dia misy ny ahiahy fa ny fahalalana ny milina dia hisolo toerana ny mpahay siansa momba ny angon-drakitra, ary toa misy ny fototr'izany ahiahy izany.
Ho an'ny mpampiasa antonony izay tsy manana fahaiza-manao fandalinana data fa manana ambaratonga samihafa amin'ny filàna fandinihana amin'ny fiainany andavan'andro dia tsy azo atao ny mampiasa solosaina afaka mamakafaka data be dia be ary manome angona fanadihadiana. Na izany aza, ny teknikan'ny Natural Language Processing (NLP) dia afaka mandresy io fetra io amin'ny fampianarana solosaina hanaiky sy hanodinana ny tenin'olombelona voajanahary. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa antonony dia tsy mila asa na fahaiza-manao famakafakana be pitsiny.
Mino ny IBM fa ny filan'ny mpahay siansa momba ny angona dia azo hamaivanina na hofoanana amin'ny alàlan'ny vokariny, ny Watson Natural Language Analytics Platform. Raha ny filazan'i Marc Atschuller, filoha lefitry ny fanadihadiana sy ny sampam-pitsikilovana orinasa ao Watson, “Miaraka amin'ny rafitra kognitika toa an'i Watson dia apetraho fotsiny ny fanontanianao - na raha tsy manana fanontaniana ianao dia mampakatra ny angon-drakitrao fotsiny dia afaka mijery azy i Watson ary hamintina izay mety ho tianao ho fantatra. ”
Ny automatisation no dingana manaraka lozika amin'ny fianarana milina ary efa miaina ny vokany amin'ny fiainantsika andavanandro isika - tranokala e-varotra, sosokevitra namana Facebook, sosokevitra tambajotra LinkedIn ary laharana fitadiavana Airbnb. Raha dinihina ireo ohatra omena, dia tsy isalasalana fa izany dia azo avy amin'ny hatsaran'ny vokatra novokarin'ny rafitry ny fianarana milina mandeha ho azy. Ho an'ny kalitao rehetra sy ny tombony azo avy aminy, ny hevitra momba ny fianarana milina miteraka tsy fananan'asa goavambe dia toa be loatra. Ny masinina dia nanolo ny olombelona tamin'ny faritra maro tamin'ny fiainantsika nandritra ny am-polony taona maro, fa ny olombelona dia nivoatra sy nifanaraka mba hitazomana hatrany amin'ny indostria. Araka ny fomba fijery, ny fianarana milina amin'ny fikorontanana rehetra dia onja iray hafa ihany izay hifanarahan'ny olona.
Changzhou Leap Machines & Equipment Co., Ltd.
158 Yunnanxi Road, Benniu Town, Distrikan'i Xinbei, Changzhou ， Jiangsu, Sina